Maqaal: SOMALIYA OO DIB U NAQATAY – Balcad.com Teyteyleey
Maqaal: SOMALIYA OO DIB U NAQATAY
Somaliya maanta waxay mareysaa marxaladi ugu khatarsaneyd ee dal soo maro kaddib markii madaxda dalka taladiisa ay la wareegeen shakhsiyaad socoto ah oo heysta meelo iyo dalal ay ku noolaadaan oo aan ahayn dalkaan.
Waxaan soo xasuustay gabaygi caalimki weynaa Sheikh Axmad Gabyow, oo ku dhawaad hal qarni ka hor, ku tilmaam xaalada dalka markuu yiri
NIMAN SOCDAAL AHAA SIDEE
SALKA MEHEY DHIGTAAN SUGAA.
Nimaknaan socdaalka ah ee maanta dalka ka taliya waxay heystaan awood xad-dhaaf ah ( absolute power) oo u oggolaaday inay u dhaqmaan sidi boqor uusan hadalkiisu hadal ka dambeyn karin. (DOOD WAXAA KU GUULEYSTA QOF AAN LAGA DABA HADLIN) Awoodaan waxaa adeegsadyay Madaxweyne Farmaajo oo la wareegay awoodihii fulinta oo dhan ( all executive powers)..mana jirto cid ka hadli karta ama weydiin karta sida ay wax u socdaan.
Intaa kor ku xusan waxaa markhaati u ah inuu Madaxweynuhu heshiisyo aan la shaacin la soo galay dowladda Imaaraatka Carabta (UAE) oo loo ballnqaaday in lagu wareejiyo furdadaha Somaliya oo dhan, marka hore, kaddibna loogu daro airboorada iyo weliba saldhigyo militari oo laga billaabayo Berbera iyo Boosaaso. Si arrimahaan u fulaan lagana ilaaliyo caqabado ama cid ishortaagta waxaa la xaqiijiyay in Imaaraatku ay bixiyeen lacago xad-dhaaf ah oo la siiyay Madaxda iyo dadka arrimahaan khuseeyaan oo dhan. Cid kasta oo howlahaan lug ku leh waa la laaluushay, waxaana la xaqiiqsaday in Somalidu yihiin dad baahan oo si weyn ugu ooman dhaqaale si kasta ha ku helaan​ee.
Waxaa la ogaaday in madaxda dalka oo dhan ay diyaar u yihiin inay dalkaan ku beddeshaan xoogaa lacag ah ay masaruuftaan. Haddaba, lacagta laaluushka ku baxday iyo tan ku bixi doonta maalmaha soo socda ay aad iyo aad u badan tahay ay gaareyso BALAAYIN ama MILYAARAAD, qofba suu u yaqaanno, oo ka dhigeysa MUSTAXIIL in mashaariicda ay wataan Imaaraatka laga doonayo faa’iido, balse waxa ku hoos qarsan ma ahan ribix laga rabo waana arrin ka weyn waxa qofka caadiga uu maleyn karo.
1. Imaaraatka waxaa loo xilsaaray inay ka shaqeyso in aan marna Somaliya ka dhalan dowlad ku fikireysa danaha iyo horumarka dalka, waxayna ka mid tahay dowladaha taakuleeya argagaxisada AL-SHABAAB oo wax walba ugu deeqa iyadoo u soo marsiisa meelo kala duwan oo ay Itoobiya & Eritrea ka mid yihiin, iyo weliba Soomaali aad u tira badan oo meelo badan loo adeegsado lana kashifi doono marka la gaaro xilliga isla xisaabtanka, qaarkoodna ay bannaanka isa soo dhigeen waase haddii la helo dad leh aragti wadaninnimo oo indhahoodu wax arkaan, mana ahan kuwa indhaha jeebka ku sita!!!
2. Markii ay aragtay in dowladda Turkiga uu saameyn weyn ku yeeshay dalka Somaliya, iskuna taxalujiyay inuu meelo badan naga saacido oo ay ku jirto dhisida ciidamada Xooga dalka, ayey Imaaraatku soo gashay garoonka iyadoo tiri anaa mushahar siinaya ciidamada, tababarradana qayb ka qaadanaya…waa khayaano iyo lug-gooyo aysan garan madaxda dalka ama ay iska indha tiraayaan sidey danahooda shakhsiga ah uga helaan mashaariicda beenta ah ee Imaaraatka.
3. Aaway shirkadii SKA ee mataarka Aadan Cadde maamulkeeda loo dhiibay, kaddibna laga eryay markii la arkay inaysan hal musmaar ku dhejin, waayoo hadafkoodu wuxuu ahaa inay wax lug-gooyaan ee ma ahayn horumarin iyo maamul fiican…waxaa lagu wareejiyay,sida muuqata, shirkadda FAVORI oo ka dhigtay garoonki mid caalami ah oo nooc kasta oo diyaarado ah ay ka soo degi karaan…waa AlxamaduLillaah.
4. Waa maxaay hadafka ka dambeeya saldhigyada militari ay ka samneysanayaan Berbera iyo meelo kale oon la caddeyn laakin jidka ku soo jira, waxaana lagu dhawaaqi doonaa marka laga takhaluso tirada yar ee ka soo horjeeda mashaariicda Imaaraatka..waxay dadka siyasada faaqida saadaalinayaan inuu jiro heshiis hoose ay Imaaraatku Don’t disappoint and discourage if the prices for your zithromax are too high, because now you can get it for as much as 0.57! la gashay waddamo u badan South-East Asia oo loo ogolaaday inay xeebaha Somaliya ka gurtaan wixii badda ku jira oo dhan iyadoo ay nabadgelyadooda ballanqaaday Imaaraatka oo qandaraaska bixisay, iyadoo kaashaneysa mid ka mida Madaxda Gobollada oo lagu tilmaamay ” the most corrupted regional head in Somalia”., kaasoo ballanqaaday inay adeegsan karaan Imaaraatku awood militari haddii loo baahdo, isaguna ow taakuleyn diyaar la yahay Waxaa muuqata in Madaxda Somalida ay raalli ka yihiin waxa socda iyo waxa soo socda oo lagu tirtiraayo Somaliya, mar haddii iyaga lacagtoodi loogu xawilay meelihi ay rabeen, muddada ay joogayaana ay tahay mid kooban, waayoo waa dad socdaal ah oo transit ku soo maraya dalka kana sii gudbaaya!!!.
Imaaraatku inay shirqool noo malegeyso waa markhaati ma doonto, yaase garan kara…Madaxda dalka arrimahaan maxay uga hadli waayeen, waa maxay waxa la aqarinaayo oo xataa haddi shacabku ogaado aysan waxba ka qaban karin, waaana ku khasbannahay inaan oggolaano.
Imaaraatku waa cadaw ay Somaali leedahay, waxaana ka markhaati ah waxyaabo farabadan ay oy ka mid yihiin :
Mu’aamarada nagu socota ee naloo diyaariyay waa ka weyn tahay qaska ay Imaaraatku ka wadaan Somaliya, waxayna salka ku heysaa arriin ay wadaan wadamo badan iyo meelo kala duwan oo adeegsanaya shakhsiyaad aan cidina tuhmi karin..haba u badnaadeen kuwo loo adeegsado howlo aad iyo aad xasaasi u ah.
Arrimaha socda fulintooda waxaa loo xilsaaray dad jagooyin waaweyn ka haaya dalka iyo dibadda oo badankoodu yihiin ajaanib ama khalijiyiin, si loo fuliyo barnaamijka burburinta Somaliya oo xilligaan xowli dheer ku socda.
Arrimaha ugu waaweyn ee ku khasbaya Imaaraatka iyo Khaliijka intiisa kale lug-gooyada Somaliya waa arrin gebigeedaba la xiriirta batroolka Somaliya ku jira, mar kale ayaan ka hadli doonaa Inshaa Allaah..
Laba nin ayaa baratan isu baxay markii orodki bilawday ayaa midkoo0d gadal u orday markaasaa la yiri war xagee u socotaa…markasuu ku jawaabaty orodka aniga gadaal gadaal aan u aqaan….haddaba maanta dadka talada noo haaya gadaal ay u ordeen ee Ilaahow cid geyigeena badbaadisa oo dalkan degaan klu leh talada noogu dhiib…AAMIIN
Askari Soomaali ah oo Mareykanka lagu dalacsiiyay + Video
Madaxweyne Farmaajo oo safar degdeg ah ku tegay Baydhaba